पूर्वराज्यमन्त्रीले चलाएको गाडीले २ मिनेटमै उजाडिदियो बिक्रमकाे जिन्दगी, श्रीमति सडकमै ढलिन्, बिक्रम चिच्याइरहे! (भिडियो) – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > पूर्वराज्यमन्त्रीले चलाएको गाडीले २ मिनेटमै उजाडिदियो बिक्रमकाे जिन्दगी, श्रीमति सडकमै ढलिन्, बिक्रम चिच्याइरहे! (भिडियो)
admin October 1, 2020 जीवनशैली, भिडियो, समाचार	0
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वराज्यमन्त्री दीपक खड्काले चलाएको गाडीको ठ क्क रवाट एक महिलाको निधन भएको छ भने उनका श्रीमान घाइते अवस्थामा छन् । खड्काले चलाएको बा ११ प ४१४१ नम्बरको प्राडो कारले जेब्रा क्रसिङमै दम्पत्तीलाई ठ क्क र दिएको हो । महिलाको अस्पताल नपुग्दै निधन भयो भने श्रीमानको अहिले उपचार पछि अहिले अस्पतालवाट डिस्चार्ज भएका छन् । यो समाचारकाे भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहाेला***
सो घटनामा खड्कालाई जोगाउन प्रहरी नै सकृय भएको आरोप पी डि तले लगाएका छन् । बुढानिलकण्ठ नगरपालिका–६ का विक्रम कार्की र उनकी श्रीमती अनुपा पाण्डे कार्कीलाई गत बुधबार ठ क्क र दिएको प्रहरीले बताएको छ । मन्त्री खड्कालाई जोगाउन कार्की दम्पतीलाई मोटरसाइकलले ठ क्क र दिएको बनाउन खोजिएको छ ।